के तपाईँ लामो समय यौनसम्पर्क राख्न चाहनुहुन्छ ? यदी त्यसो हो भने यसो गर्नुस् - Nuwakot Express
मेरो विवाह भएको दुई वर्ष भयो । म दुई–चार मिनेटभन्दा बढी यौनसम्पर्क गर्न सक्दिनँ । मेरी श्रीमती मबाट सन्तुष्ट छैनन् । लामो समयसम्म यौनसम्पर्क राख्न के गर्नुपर्ला ?
यौन उत्तेजनामा आउने र विभिन्न चरणमा अघि बढ्दै जाने कुरा कतिपय बाह्य तथा आन्तरिक कुराहरूमा भर पर्छ ।पुरुषले योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएदेखि वीर्यस्खलनसम्मको समयलाई Intravaginal Ejaculation Latency Time भनिन्छ । यो समय व्यक्ति–व्यक्तिअनुसार फरक–फरक हुन्छ र एक व्यक्तिको पनि फरक–फरक समयमा फरक–फरक हुन सक्छ ।
सामान्यतया उमेर बढ्दै जाँदा उक्त समय केही घट्छ । एक अध्ययनले सालाखाला यसको समय ५ दशमलव ४ मिनेट रहेको देखाएको छ । यहाँ भनिरहनु पर्दैन कि यौनसम्पर्कको समय व्यक्ति, जोडी अनि परिस्थितिअनुरूप फरक–फरक हुन्छ । Journal of Sexual Medicine मा गरिएको एक अध्ययनमा sex therapist ले १–२ मिनेटको यौनसम्पर्कको समयलाई ‘धैरै छोटो’, ३–७ मिनेटको समयलाई ‘पर्याप्त’ अनि ७–१३ मिनेटको समयलाई ‘वाञ्छनीय’ मानिएको छ ।
नेपालमा नेपालीले यौनसम्पर्क राख्ने समय कति हुन्छ भन्ने अध्ययन भएको जानकारी मलाई छैन, त्यसैले बाहिरका अध्ययनलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ तर महत्वपूर्ण कुरा यौनसम्पर्क भनेपछि योनिमा लिङ्ग पसाएपछि मात्र सुरु हुने कुरामा सीमित हुने सोचभन्दा वाहिर आउनुपर्छ ।
तपाईं वा तपाईंकी श्रीमतीलाई राम्रोसँग यौन उत्तेजनामा आउन लाग्ने समयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सबैभन्दा मुख्य कुरा यौनसम्पर्कमा संलग्न दुवै जना यस्ता यौनसम्पर्कको समयावधिलाई लिएर सन्तुष्ट हुनुपर्छ । कसरी लामो समयसम्म यौनसम्पर्क राख्ने रु सर्वप्रथम त तनावरहित हुन आवश्यक छ ।
तनाव, चिन्ता अनि विशेष गरेर यौन सक्षमताको चिन्ताले यसमा कुनै सहयोग गर्दैन । यौन साथीलाई आफ्नो यौन क्षमता प्रदर्शित गर्नुपर्ने दबाब भए समस्या थप चर्को हुन सक्छ । यस्तो स्थितिलाई उभायचmबलअभ बलहष्भतथ भनिन्छ । एकपल्ट यस विषयमा पनि राम्रोसँग लेख्नुभए जवाफ दिन सजिलो हुने थियो । यौनसम्पर्कको समय छोटो हुने समस्यालाई कम गर्न आफैंले गर्न सकिने केही उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
यौनसम्पर्क रोक्ने–सुरु गर्ने स् यौनसम्पर्कका क्रममा स्खलन होला जस्तो भएपछि तुरुन्तै योनिबाट लिङ्ग झिकेर केही बेर यौन क्रीडा रोक्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि पुनस् सुरु गर्ने । आसन परिवर्तन गर्ने स् लोग्नेमान्छे माथि र महिला तलको सट्टा महिला माथि बसेर सक्रिय भै यौनसम्पर्क गर्दा पनि स्खलन रोक्न मद्दत मिल्छ ।
लिङ्ग अँठ्याउने : यौनसम्पर्कका क्रममा स्खलन होला जस्तो भएपछि तुरुन्तै लिंग योनिबाट बाहिर झिकेर लिङ्गको फेदलाई बेस्सरी अँठ्याउने र वीर्य स्खलन हुन नदिने । उत्तेजना केही कम भएपछि पुनस् यौनक्रीडा सुरु गर्ने । कन्डमको प्रयोग स् कन्डमको प्रयोगवाट पनि कतिपयलाई शीघ्र स्खलनको समस्या कम गर्न मद्दत पुगेको छ ।
यस्तो बेला चिप्लो पदार्थ कम भएको तथा बाक्लो किसिमको कन्डमले बढी फाइदा पुर्‍याउँछ । मांसपेशीको प्रयोग स् पिसाब आउँदा रोक्न प्रयोग हुने मांसपेशीको कसरत गरेर वीर्य स्खलनलाई रोक्ने अभ्यास गर्न सके फाइदा मिल्छ । श्रीमती सन्तुष्ट नभएको कुरा तपाईंकी श्रीमती सन्तुष्ट नभएकै हो वा तपाईंलाई त्यस्तो लागेको मात्र हो भन्ने कुराअनुसार फरक–फरक समाधान हुन सक्छ ।
तपार्इंकी श्रीमतीमा यौनेच्छा बढी भएको पनि हुन सक्छ । यो कुरा तपाईंहरूबीचको सम्बन्धको सुमधुरता मात्र होइन, शारिरीक तथा मानसिक स्थितिमा पनि भर पर्छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यौनसम्पर्कवाट मात्र महिलाले यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने होइन । महिलाले कसरी यौन सुख प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिने मात्र होइन, त्यसमा संलग्न पनि हुनुपर्छ ।
महिलाको सबैभन्दा यौन संवेदनशील अङ्ग ‘भगाङ्कुर’ बाहिरतिरै हुन्छ । त्यसलाई हात वा औंलाले चलाएर यौन चरमसुख प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ । योनि अर्को महत्वपूर्ण अङ्ग हो । यसको बाहिरतिरको भाग यौन संवेदनशील हुन्छ । योनिमा केही पसाई त्यसबाट घर्षण गराएर आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
स्तन तथा अन्य यौन संवेदनशील अङ्गको मर्दन, घर्षण अनि चलाउने जस्ता क्रियालापमा संलग्न हुन सकिन्छ । त्यसबाहेक अन्य नयाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ । यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पाक्क्रीडामा संलग्न भए यौन उत्तेजना प्राप्त गर्न र चरमसुखसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ ।
पत्रकार न्यौपाने सम्मानित
फाल्गुन ७, २०७४ - सोमवार
काठमाण्डौ, ७ फाल्गुन । राष्ट्रिय समाचार समितिले आफ्नो वार्षिकोत्सवको...
नुवाकोटको साततले दरबारबाट प्याराग्लाइडिङ, हात्ती सफारीसमेत गराइने
फाल्गुन ११, २०७४ - शुक्रबार
नुवाकोट- नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा फागुन १६ देखि...
के भएर थलिए ओली ? के हुँदैछ ?
काठमाडौं । कडा खालको झाडापखालाले अस्वस्थ बनेका एमाले अध्यक्ष...
सुरुङमार्ग बन्ने हल्लाले जग्गाको भाउ अकासियो
मंसिर २८, २०७४ - बिहिबार
२८ मंसिर, नुवाकोट (नुवाकोट एक्स्प्रेस संवाददाता) सरकारले काठमाडौं टोखाबाट...
देशभरका शिक्षा प्रमुखको सरुवा, नुवाकोटमा को आए ? (सूचीसहित)
काठमाडौं, १० जेठ । शिक्षा मन्त्रालयद्वारा देशभरका शिक्षा विकास...